Maamulka Hir-Shabeelle oo faah faahiyay howlgallo dad farabadan lagu qabqabtay – Banaadir Times
Maamulka Hir-Shabeelle oo faah faahiyay howlgallo dad farabadan lagu qabqabtay
By banaadir 6th January 2021 26 No comment
Ciidamada Ammaanka ka howlgalla Magaalada Jowhar ayaa waxaa ay Xaafado ka tirsan Magaaladaasi ka sameeyeen howlgallo lagu xoojinayo amniga Magaalada, iyada oo howlgaladaas lagu qabqabtay dad farabadan.
Howlgalka oo ay siwadjir ah u fuliyeen Ciidamo isugu jira, Boolis, Nabadsugid, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Ciidamada Haramcad iyo kuwa AMISOM ayaa baaritaano waxaa ay ka sameeyeen Xaafadaha qaar iyo wadooyinka Magaalada Jowhar.
Taliyaha Howlgallada Maamulka Gaashaanle Dhexe Muqtaar Cabdulle Nuur ayaa sheegay in howlgalka ay Ciidamada kusoo qabteen dad lagu tuhmaayo inay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Shabaab.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in howlgalka ay ku qabteen Agab kala duwan oo ay lahaayeen Al-Shabaab, isla markaana howlgalalda ay ahaayeen kuwo maalmihii la soo dhaafay ka socday Magaalada Jowhar.
Ugu dambeyn Taliyaha waxaa uu sheegay in xogaha ay ka heleen Shacabka ay ku howlgallaan, waxaana uu balan qaaday inay howlgalalda kasii wadi doonaan Afarta Xaafadood ee Magaalada Jowhar.
Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya oo gaaray Gobolka Bakool
Shir laga yeeshay Amniga Magaalada Jowhar
Kulankii Jaalliyadda Soomaalida Amstetdam ( Zuid-Oost & Madaxda Degmadda Zuid-Oost)
Dagaalo ka dhacay degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose